>Rangoon Street Journalist – Colorful Phones in Burma | MoeMaKa Burmese News & Media
>Kyay Mon U Thaung
ကျော်ဟုန်း - ကနေဒါ ဗန်ကူးဗားမှ ၂၆ နှစ်မြောက် ရှစ်လေးလုံးအခမ်းအနား
ကယ်လီဖိုးနီးယားကို မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ရုံး လာဖွင့်မယ်
>Tin Moe - The Place of Paduak
NLD ရဲ့ ထိပ်တန်းကိစ္စသုံးရပ်နဲ့ ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ရဲ့အဓိကတာဝန်
>Rangoon Street Journalist – Colorful Phones in Burma
ရန်ကုန်ရှုခင်း – မတ်လ ပထမပတ်
များလိုက်တဲ့ ဖုန်းမျိုးစုံနဲ့ ငါတို့တိုင်းပြည် မြန်မာပြည်
မတ် ၃၊ ၂၀၁၀
၁၉၉၀ ခုနှစ် အလယ်နှောင်းပိုင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံက သုံးစွဲသူတွေဆီ မိုဘိုင်းဖုန်း စနစ်ကို ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာ ယခု ဆယ်လူလာစနစ်သုံး ဖုန်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စထွက်ခါစ ကျပ်၁၀သိန်း ၁၂သိန်းဝန်းကျင်မှနေ အမြင့်ဆုံး ကျပ်သိန်း ၂၀ ၀န်းကျင်ထိ ဈေးပေါက်ခဲ့ ပါသေးတယ်။ ထိုစဉ်က မိုဘိုင်းဖုန်း လက်ဝယ်ကိုင်နိုင်တယ် ဆိုတာဟာ လူနေမှု အဆင့်အတန်း ကိုပြသတဲ့ လက္ခဏာ တခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၀ ခုနှစ်ကျော်ထိ မိုဘိုင်းဖုန်းကိုင်သူများအနေနဲ့ ဘတ်စ်ကားထဲမှာ ဖုန်းမပြောရဲ ကြသေးပါဘူး။ ဖုန်းကိုင်တဲ့ အဆင့်အတန်းနဲ့ ဘတ်စကား စီးနင်းတဲ့ အချက်က မလိုက်ဖက်လို့ပါ။ အချို့သောဖုန်းကိုင်သူတွေ ဘတ်စ်ကားစီးရတောင်မှ ကားပေါ်မှာ ဖုန်းကိုပိတ်ထားတတ် ကြပါတယ်။ ဖုန်းကိုင်နိုင်တဲ့ သူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ လူနေမှု အဆင့်အတန်းဘယ်မှာ ရှိတယ်ဆိုတာ ပြသချင်တဲ့ သဘောပါ။
ယခင်က အခြားဂျီအက်စ်အမ်၊ စီဒီအမ်အေ မိုဘိုင်းဖုန်းတွေနဲ့ ပြောဆိုခ အတူတူဖြစ်ပြီး အထွက်ခေါ်ဆိုခ တမိနစ် ၂၅ကျပ် ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုတပြန် ဖုန်းခေါ်ဆိုခမြင့်တက်သွားတဲ့ အထဲမပါတာတွေ့ရပါတယ်။ အခြားမိုဘိုင်းတွေက တမိနစ် ၅၀ ကျပ်ဖြစ်နေချိန်မှာ ၂၅ကျပ်ပဲ ကျသင့်တဲ့ ဆယ်လူလာကို လူပိုကြိုက်မယ်လို့ ထင်မြင်စရာရှိသော်လည်း နက်ဝေါ့ခ် သိပ်မကောင်းခြင်း၊ သုံးစွဲနိုင်တဲ့မြို့အရေအတွက် နည်းပါးခြင်းတို့ကြောင့် လူကြိုက်သိပ်မများတော့ပဲ ပြင်ပဈေးကွက်မှာ ကျပ်၁၀သိန်းအောက် သာရှိတော့တာ တွေ့ရပါတယ်။ ဖုန်းနံပါတ်က ၀၉၉၉…..နဲ့စပြီး ဂဏန်း၉လုံးပါရှိပါတယ်။ မြန်မာပြည်ဖုန်းဈေးကွက်မှာတော့ ကိုးဂဏန်းနှစ်လုံးနဲ့ စတင်လို့ “နိုင်းနိုင်း” လို့လည်း ခေါ်ကြပါတယ်။
စီဒီအမ်အေ ၈၀၀ မီဂါဟဇ် စနစ်သုံး အထိုင်ဖုန်းလို့ခေါ်တဲ့ စနစ်ကို ၁၉၉၉/၂၀၀၀ ခုနှစ်များဆီက စတင်ငှားရမ်းချပေးခဲ့တာပါ။ ရန်ကုန်နဲ့ မန္တလေးမြို့တွေမှာပဲ သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။ စတင်အငှားချပေးစဉ်က မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေးကို ကျပ် ၅သိန်းပေးသွင်းရပါတယ်။ အမေရိကန် ကွာကွန်းလ် Qualcom ကုမ္ပဏီက ထုတ်လုပ်တဲ့ အထိုင်ဖုန်း တွေနဲ့ သုံးခဲ့ကြပါတယ်။ ဖုန်းနဲ့ ဖုန်းအောက်မှာ တွဲလျက်နေတဲ့ တပိသာလောက်လေးတဲ့ ဘက်ထရီ အတွဲကို ပလပ်စတစ်ခြင်းနဲ့ထည့်ပြီး သယ်သွားကြလို့ မြန်မာပြည်မှာ ခြင်းဖုန်းလို့ခေါ်ကြတာပါ။ ပြောဆိုခ တမိနစ်ကို ယခုအချိန်ထိ မြို့တွင်း ၁၅ကျပ်၊ နယ်အဝေး ၂၅ကျပ်ပဲ ကျသင့်ဆဲပါ။
ခေါ်ဆိုခ သက်သာတာရော၊ နေရာရွှေ့ပြောင်းနိုင်ပြီး ဖုန်းကိုကြာရှည်ကြာမျောသုံးသူတွေအတွက် ကောင်းလို့ နှစ်လုံး၊ သုံးလုံး ဂဏန်းချဲထီ လုပ်ကိုင်သူတွေ၊ မင်္ဂလာဈေးမှ ကုန်သည်တွေ နှစ်သက် ခဲ့ကြပါတယ်။ ဖုန်းနံပါတ် ၇…..နဲ့စပြီး ဂဏန်း ၆လုံးပါရှိပါတယ်။
အိုင်ပီစတား လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ ဂြိုဟ်တုဆက်သွယ်ရေး စနစ်သုံး အင်တာနက်လိုင်းပေါ်မှ တဆင့်သွားတဲ့ ဖုန်းကို အိုင်ပီစတားဖုန်းလို့ခေါ်ဆိုပါတယ်။ နယ်ဝေးမြို့တွေ ဝေးလံခေါင်ဖျားတဲ့ဒေသ တွေအတွက် အင်တာနက်နဲ့ ဖုန်းဆက်သွယ်ရေး ရရှိအောင် ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွှန့်ရဲ့ သားရဲနိုင်ဝင်း ပုဂံဆိုင်ဘာတက်ခ်ကို စီမံခန့်ခွဲလုပ်ဆောင်ခဲ့စဉ်က ရောင်းချပေးခဲ့ပြီး ယခုနောက်ပိုင်း ဆက်သွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌါနက ဆက်လက်တာဝန်ယူ ရောင်းချပေးနေတာပါ။ အင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေး (ဒေတာ) အတွက်ရော အင်တာနက် ပေါ်မှသွားတဲ့ VOIP စနစ် ဖုန်းနှစ်မျိုးလုံး အတွက် အိုင်ပီစတားကိုရောင်းချပေးပေမယ့် မြ၀တီ၊ တာချီလိတ်၊ ရခိုင်၊ မူဆယ်တို့လိုနယ်စပ်မြို့တွေ အခြားမိုဘိုင်းစနစ် မရရှိခင်က ဖုန်းအတွက်သာ အိုင်ပီစတားကို ၀ယ်ယူခဲ့ကြတာပါ။ ပြည်တွင်းကို ဆက်သွယ်ဖို့ရာ အိုင်ပီစတားဖုန်းကို သုံးစွဲခဲ့ကြပါတယ်။ ယခုတော့ အဆိုပါနယ်စပ်မြို့တွေမှာ ကမ်းရိုးတန်းဖုန်းတွေ သုံးစွဲနိုင်လာပြီမို့ အိုင်ပီစတားဖုန်းတွေ သိပ်ခေတ်မစားတော့ပါဘူး။ အိုင်ပီစတား ဆက်သွယ်ရေး စနစ်တစုံကို သက်ဆိုင်ရာ မှဝယ်ယူစဉ်က ကျပ် သိန်း ၃၀မှ သိန်း၄၀ထိ ပေးဆောင်ခဲ့ကြရပါတယ်။
ဖုန်းပြောဆိုခကတော့ ကြိုးဖုန်းလို့ခေါ်တဲ့ လိုင်းဖုန်းတွေနဲ့ အတူတူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းနံပါတ်ကတော့ ၄….နဲ့စပြီး ဂဏန်း၈လုံးပါရှိပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကို ၂၀၀၂ ခုနှစ်မှာ စတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်းစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုစဉ်က စကိုင်းလင့်ခ် Skylink Co. ကုမ္ပဏီနဲ့ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းတို့ တွဲဘက်လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာပါ။ စတင်ငှားရမ်းပေးစဉ်က ကျပ် ၅သိန်းပေးသွင်းရပြီး ပြင်ပပေါက်ဈေးက သိန်း ၂၀ကျော်အထိရှိခဲ့ပြီး ၂၀၀၃ နဲ့ ၂၀၀၄မှာတော့ အမြင့်ဆုံး သိန်း၅၀နီးပါးအထိ မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။
ထိုစဉ်က ဗိုလ်ချုပ်တွေ ၊ ၀န်ကြီးတွေသူတို့လက်မှတ်နဲ့ ဂျီအက်စ်အမ် လျှောက်ပြီးရောင်းစားကြ၊ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေ သုံးစွဲကြ၊ တပ်အရာရှိတွေ၊ အရပ်ဘက်ဆိုင်ရာ အရာရှိကြီးတွေ ကိုငှားရမ်းခွင့် ချပေးလို့ ထုတ်ပြီးရောင်းကြနဲ့ ဂျီအက်စ်အမ်ဖုန်းဟာ နအဖ အစိုးရရဲ့ စည်းရုံးရေး လက်နက်သဖွယ် နှစ်အတန်ကြာ ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။
ယခင်မိုဘိုင်းဖုန်း များလိုကုဒ်စနစ်မဟုတ်ပဲ ဆင်းကဒ် စနစ်သုံးထားတာ ဖြစ်လို့ hand set ကိုလွယ်ကူစွာလဲလှယ် နိုင်ခြင်း၊ ပြောဆိုနိုင်တဲ့မြို့များပြားခဲ့ခြင်းကြောင့် ဂျီအက်စ်အမ်ဖုန်းဟာ နှစ်အတော်ကြာ လူကြိုက်အများဆုံး ဖုန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ယခုအချိန်အထိလည်း မိုဘိုင်းဖုန်းထဲမှာ အရေအတွက် အားဖြင့် အများဆုံးသုံးစွဲနေတဲ့ ဖုန်းအမျိုးအစားဖြစ်နေဆဲပါ။ ၀၉၅….သို့မဟုတ် ၀၉၄….နဲ့စပြီး ဂဏန်းကိုးလုံး ပါရှိပါတယ်။
ယခုနှစ်ဆန်းမတိုင်မီထိ မြို့တွင်း တမိနစ် ၂၅ကျပ်၊ နယ်ဝေး ၃၅ကျပ် ကောက်ခံခဲ့ရာမှ ဇန်န၀ါရီလ ၁ရက်နေ့မှစလို့ နယ်ဝေးရော မြို့တွင်းပါ တမိနစ်ကို ၅၀ကျပ်သို့ပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်။ ဂျီအက်စ်အမ်ရဲ့ အားသာချက် နောက်တခုကတော့ SMS စာတိုပို့စနစ် သုံးလို့ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကျော် မိုဘိုင်းကွန်ရက် စွမ်းဆောင်ရည်ကျနေတဲ့ အချိန်၊ ကျတဲ့နေရာတွေမှာ ၊ နောက်ပြီး ပြောလို့သဲသဲကွဲကွဲမကြားတဲ့အခါ မျိးမှာ စာတိုပို့စနစ်နဲ့ ပို့ထားပြီး တဘက်သားကို အသိပေးကြရတာလည်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရှုခင်းတခုပါ။
ဂျီအက်စ်အမ်ဆင်းကဒ် တကဒ်ကို အစိုးရငှားရမ်းနှုန်း ကျပ်ငါးသိန်းမှ ကျပ် ၁၀သိန်းသို့ မြှင့်တင်ခဲ့ပြီး နောက်တဖန် ၁၅သိန်းသို့ထပ်မံ မြှင့်တင်ခဲ့ပြန်ပါသေးတယ်။ ယခုလောလောဆယ် ပြင်ပဖုန်း ဈေးကွက်မှာ ၀၉၅၁…. ၀၉၅၀…နဲ့စတဲ့ သုံးပြီးသား ဂျီအက်စ်အမ်ဆင်းကဒ် တကဒ် ပေါက်ဈေးဟာ ကျပ် ၁၃၊ ၁၄သိန်းသာရှိပါတော့တယ်။ မသုံးရသေးတဲ့ ဆင်းကဒ်ကို မိမိနာမည်နဲ့ ၀ယ်ချင်ရင်တော့ ၁၆သိန်းကျော် ရှိပါသေးတယ်။ ၁၆သိန်းကျော်နဲ့ ၀ယ်ယူသူတော့ နည်းပါးသွားပြီလို့ ဈေးကွက်ထဲမှ ပြောဆိုကြပါတယ်။
တမိနစ် ပြောဆိုခကတော့ နီးနီးဝေးဝေး ကျပ် ၅၀နဲ့ စာတို တစောင်ကို ၂၅ကျပ် ကျသင့်ပါတယ်။
ခြင်းဖုန်းလို့ခေါ်တဲ့ စီဒီအမ်အေ အထိုင်ဖုန်းနဲ့ နည်းပညာ၊ ကြိမ်နှုန်းအတူတူပဲ ဖြစ်ပေမယ့် ဖုန်းနံပါတ်က ၀၉၈၀…နဲ့စပြီး ဂဏန်း၉လုံး ပါရှိပါတယ်။ ၀၉၈၀နဲ့ စတဲ့အတွက် အိတ်ဇီးရိုး တွေလို့အတိုကောက်ခေါ်ကြပါတယ်။ ၂၀၀၀ခုနှစ် အစပိုင်းတွေထဲက စတင်ငှားရမ်းခဲ့ပြီး ၂၀၀၂ ခုနှစ်မှာ နောက်ထပ်တသုတ်ထပ်မံ ငှားရမ်းခဲ့ပါတယ်။ အစိုးရထံမှ ငှားရမ်းခွင့်ချပေးရာမှာ ကျပ်ငါးသိန်းဖြစ်ပေမယ့် ပြင်ပပေါက်ဈေး ကျပ် ၂၅သိန်းဝန်းကျင် ရှိခဲ့ပြီး ၂၀၀၃၊ ၂၀၀၄မှာ အမြင့်ဆုံး ၅၁ သိန်းလောက်ထိ မြင့်တက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
ရန်ကုန်နဲ့ မန္တလေး၊ စစ်ကိုင်းမြို့မှာပဲ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ငှားရမ်းခွင့်ချပေးစဉ်က အများစုကို စစ်တပ်က အရာရှိတွေပဲ ရရှိကြပြီး သူတို့က အကျိုးအမြတ်နဲ့ ပြင်ပဈေးကွက်မှာ ပြန်ရောင်းချခဲ့ကြတာပါ။ ယခင်က သိန်း ၃၊၄၊ ၅ဆယ်ရှိခဲ့ပေမယ့်လည်း လက်ရှိ ပြင်ပဖုန်းဈေးကွက်မှာ ကျပ် ၁၀သိန်းကျော်သာရှိပါတော့ တယ်။ ပြောဆိုခကတော့ ဂျီအက်စ်အမ်ဖုန်းနဲ့ အတူတူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၄၅၀ မီဂါဟတ်ဇ် စီဒီအမ်အေ စနစ်သုံး ဖုန်းကိုစတင ထုတ်ပေးတဲ့ရက်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို နာဂစ်မုန်တိုင်း ၀င်ရောက်တဲ့ရက် တိုက်ဆိုင်ပြီး နာဂစ်ဒဏ်ခံစားရတဲ့ ဧရိယာတွေမှားနာဂစ်ဒဏ်နဲ့ ဖုန်းလိုင်းတွေ ပျက်စီးနေစဉ် အသုံးဝင်ခဲ့လို့ အချို့က နာဂစ်ဖုန်းလို့ခေါ်ဆိုကြတာပါ။ စတင်စဉ်က ကမ်းရိုးတန်း ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေကို အဓိက ရည်ရွယ်ပြီး တပ်ဆင်ခဲ့တာကြောင့် တရားဝင်အမည်က ကမ်းနီးကမ်းဝေး စီဒီအမ်အေလို့ ခေါ်ပြီး သုံးစွဲသူအများကြားမှာတော့ ကမ်းရိုးတန်းဖုန်းရယ်လို့ လူသိများပါတယ်။
အထိုင်ဖုန်းနဲ့လည်း သုံးလို့ရသလို တရုတ်နိုင်ငံက တင်သွင်းလာတဲ့ Hand Set တွေနဲ့လည်း မိုဘိုင်းဖုန်းသဖွယ်သုံး စွဲနိုင်ပါတယ်။ ၂၀၀၈ခုနှစ် မေလနောက်ပိုင်း စတင်ငှားရမ်း ခဲ့ရာမှာ အခုဆို မြန်မာနိုင်ငံမှာ မြို့အများဆုံးမှာ သုံးစွဲ နိုင်တဲ့ ဖုန်းဖြစ်နေပါပြီ။ လက်ရှိမြို့ပေါင်း ၁၂၀ ၀န်းကျော်မှာ သုံးစွဲနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ ကြိမ်နှုန်းနိမ့်စနစ်ဖြစ်လို့ အသံအရည်အသွေး မကောင်းခြင်း၊ ပါဝါ သုံးစွဲမှုများပြီး ဘထ္ထရီ နာရီကြာကြာမခံခြင်း စတဲ့အားနည်းချက်တွေ ရှိပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ဧရာဝတီတိုင်းလိုမျိုးမှာ နေရာအတော်များများ သုံးစွဲနိုင်ခြင်း ရန်ကုန်မန္တလေး ကားလမ်းတလျှောက်၊ ရန်ကုန်မော်လမြိုင် ကားလမ်းတလျှောက် သုံးစွဲနိုင်ခြင်းတွေက အားသာချက်တွေပါ။
အစိုးရထံမှ ငှားရမ်းတဲ့အခါ စတင်ငှားရမ်းခါစ ၁၆သိန်းမှ သိန်း ၂၁၊ ၂၂သိန်းထိ ရှိခဲ့ပြီး ယခုအခါပြင်ပဈေးကွက်မှာ ၁၅သိန်း၊ ၁၆သိန်း ၀န်းကျင်နဲ့ အရောင်းအ၀ယ်ဖြစ်နေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကျေးရွာများမှာ နေထိုင်သူတွေ၊ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေး ရယက၊ ကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများမှာ အသုံးများတာ တွေ့ရပါတယ်။ ၄၅၀စီဒီအမ်အေ နက်ဝေါ့ခ်တိုင်တတိုင်ဟာ မိုင်ငါးဆယ် အကွာအဝေးထိ ရောက်ရှိတာမို့လို့ ယခင်က မိုဘိုင်းဖုန်း လက်လှမ်းမမီတဲ့ ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားပေါ်လိုမျိုးမှာ ကမ်းရိုးတန်းဖုန်း သုံးနိုင်တာတွေ့နေရပါတယ်။ ပြောဆိုခ ကတော့ စီဒီအမ်အေမိုဘိုင်း၊ ဂျီအက်စ်အမ်တို့နဲ့ အတူတူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖုန်းနံပါတ်က ၀၉၈၅… ၀၉၈၆…. ၀၉၈၇…. စတဲ့နံပါတ်တွေနဲ့စပြီး ဂဏန်း ၉လုံးပါရှိပါတယ်။
၂၀၀၉ ဇန်န၀ါရီတရက်နေ့ ရတနာပုံ စီတီး အိုင်တီပွဲမှာ စတင် မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ ကြိုတင်ငွေပေးစနစ်သုံး ဂျီအက်စ်အမ် ဖုန်းပါ။ စတင်ရောင်းစဉ်က အက်ဖ်အီးစီ ၁၀တန်၊ ၂၀တန် နှစ်မျိုးရောင်းချ ခဲ့သော်လည်း ယခုနောက်ပိုင်း ၂၀တန်ကဒ်သာ တွင်ကျယ်နေပါတယ်။ အထွက်ခေါ်ဆိုမှု တမိနစ်ကို အက်ဖ်အီးစီ .၃ ယူနစ် (မြန်မာငွေ ကျပ်၃၀၀ ကျော်) နဲ့ အ၀င်လက်ခံခြင်းကို တမိနစ် အက်ဖ်အီးစီ .၀၅ ယူနစ်(ကျပ် ၅၀ကျော်) ကျသင့်ပါတယ်။ စာတိုပို့ရင်တော့ တစောင်ကို အက်ဖ်အီးစီ .၀၅ယူနစ်ကျသင့်ပါတယ်။
ကျောင်းသား လူငယ်များ၊ ယာယီအားဖြင့် အလုပ်ကိစ္စအရေးကြီးလို့ ဆက်သွယ်ဖို့ နံပါတ်တခုလိုအပ်သူများ၊ လုံခြုံရေးအရ နံပါတ်သေ မကိုင်လိုသူများ နဲ့ ပြည်ပမှ အလည်လာရောက်တဲ့ နိုင်ငံခြားသား ခရီးသည်များ ကိုင်ဆောင်ကြပါတယ်။ ယခုဖုန်းကဒ် မပေါ်ထွက်ခင်က ဖုန်းကိုင်ဆောင်လိုရင် ကိုယ်ပိုင်ဝယ်လိုက ၀ယ်၊ မ၀ယ်ပဲ ငှားရမ်း အသုံးပြုမယ်ဆို အနည်းဆုံး တလ ကျပ် ၄ သောင်းမှ ၄ သောင်းခွဲ သုံးစွဲကြရပြီး ယခုလို ၂၀တန်ဆင်းကဒ် ပေါ်လာတဲ့အခါ ထိုသို့သောသူများ အတွက် အဆင်ပြေလို့ သုံးစွဲကြပါတယ်။
နိုင်ငံတော် သူဌေးကြီးဖြစ်တဲ့ ဦးတေဇပိုင် ထူးကုမ္ပဏီရဲ့ ကုမ္ပဏီခွဲ စင်ထရယ် မားကက်တင်း က ဖြန့်ချီရောင်းချခြင်း ဖြစ်ပြီး ရောင်းဈေး အက်ဖ်အီးစီ ၂၀သတ်မှတ်ထားပေမယ့် သုံးစွဲသူအများစုမှာတော့ တဆင့်ခံ ပြန်ရောင်းသူတွေဆီကပဲ ၀ယ်ယူကြရပါတယ်။ ပြင်ပပေါက်ဈေး တကဒ်ကို ၂သောင်း ၄ထောင်မှ ယခုလအတွင်း ၂သောင်း ၈ထောင်ကျော်ထိ မြင့်တက်လာပါတယ်။ တလမပြည့်မီ ပြောဆိုခကုန်သွားခဲ့ရင် ထပ်မံဖြည့်သွင်းလို့မရပဲ စာတိုပို့စနစ်သာ လက်ခံနိုင်ပါတော့တယ်။
ကျပ်သိန်းဆယ်ဂဏန်းနဲ့ ချီတဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းကို ပေးမ၀ယ်တဲ့သူများ အနေနဲ့ ကျပ်ငွေ ၂သောင်းကျော်နဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်း တလုံး တလခန့်ကိုင်နိုင်လို့ သုံးစွဲကြတာမျိုးလည်း တွေ့ရပါတယ်။
သိရှိရသလောက်ဆိုရင် တရုတ်နိုင်ငံ ဆက်သွယ်ရေး ကုမ္ပဏီ တခုက နအဖ အစိုးရကို အဆိုပါနက်ဝေါ့ခ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ နမူနာအဖြစ် ပေးတဲ့ ပစ္စည်း ကိရိယာတွေကို မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ တပ်ဆင်ပြီး ဖုန်းသုံးစွဲသူတွေကို ရောင်းစားလိုက်တာ လို့ဆက်သွယ်ရေး အရာရှိတဦးက ဆိုပါတယ်။ အဆိုပါ စနစ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အလားတူ ပစ္စည်းတွေလည်း မ၀ယ်ယူတော့ပဲ စကားပြောစဉ် တဖက်က အရုပ်ကို တဖက်က မြင်နိုင်တယ် ဆိုပြီး ဒဗလျူ စီဒီအမ်အေ ကိုကြေငြာခဲ့ပါတယ်။
လက်တွေ့မှာ ရန်ကုန်မြို့တွင်း ၆မြို့နယ်မှာသာ ဒဗလျူစီဒီအမ်အေ စနစ်နဲ့ သွားပြီး ထိုမြို့နယ်များ ကျော်လွန်သွားခဲ့ရင်တော့ ရိုးရိုး ဂျီအက်စ်အမ် ဖုန်းလိုပဲ သုံးစွဲနိုင်တော့မှာပါ။ ပြောဆိုခ ဂျီအက်စ်အမ် ဖုန်းနဲ့ အတူတူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အပြင်ဈေးကွက်မှ ဖုန်းတန်ဖိုးလည်း ဂျီအက်စ်အမ်ထက် အနည်းငယ်မျှသာ ဈေးပိုတာကို တွေ့ရပါတယ်။
နေပြည်တော်မှ ပထမဆုံးခွင့်ပြုတဲ့ ကမ်းရိုးတန်းစနစ်သုံး စီဒီအမ်အေဖုန်းနဲ့ စနစ်လည်းတူ ပြောဆိုခလည်းတူပါတယ်။ သို့ပေမယ့် သုံးစွဲနိုင်တဲ့ ဧရိယာမှာတော့ ကမ်းရိုးတန်းဖုန်းလို တနိုင်ငံလုံး မဟုတ်ပဲ နေပြည်တော် ဧရိယာအတွင်း ကန့်သတ်ထားရှိတာ ကိုတွေ့ရပါတယ်။ ပြောဆိုခ ကမ်းရိုးတန်း ဖုန်းနဲ့ အတူတူဖြစ်ပြီး နီးနီးဝေးဝေး တမိနစ် ၅၀ကျပ် ဖြစ်ပါတယ်။
ထူးခြားတာက ပြောဆိုခကို ကြိုတင်ငွေပေးကဒ် စနစ်နဲ့သာ ထည့်သွင်းဖို့ ပြုလုပ်ထားပြီး ကျပ် ၁၊ ၂၊ ၃သောင်းနဲ့ အက်ဖ်အီးစီ ကြိုတင်ငွေပေးကဒ် တွေဝယ်ပြီးဖြည့်သွင်းမှ ဖုန်းဆက်သွယ်လို့ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြောဆိုခ တမိနစ် ၅၀ကျပ် ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်ပပြောဆိုခကိုတော့ အက်ဖ်အီးစီ ကြိုတင်ငွေဖြည့်ကဒ် ဖြည့်သွင်းထားမှ ဆက်သွယ်နိုင်မှာပါ။
ရန်ကုန်မြို့မှာတင် အလုံးရေ ၁သိန်း အငှားချပေးမယ်လို့ ထုတ်ပြန်ပြောဆိုချက် များအရ သိရပါတယ်။ အစိုးရနဲ့ နီးစပ်တဲ့ ထူးကုမ္ပဏီရဲ့ ကုမ္ပဏီခွဲ များကပဲ ဟန်းဆက်ရောင်းချခြင်း ကဒ်ရောင်းချခြင်းတို့ လုပ်ဆောင်နေတာပါ။ ရန်ကုန်အတွက်တော့ ၇၃….နဲ့ စတင်ပြီး ဂဏန်း ၈လုံးပါရှိတဲ့ နံပါတ်တွေကို သုံးစွဲပါတယ်။
ပြောဆိုခနှုန်းထားကတော့ ပြည်တွင်း ခေါ်ဆိုမှုအတွက် တမိနစ် ကျပ် ၅၀ ပုံသေဖြစ်ပါတယ်။
ယခင်ကထက် ဈေးလျော့လာပေမယ့် နိုင်ငံတကာနဲ့ ယှဉ်ရင် မယှဉ်နိုင်အောင် မြင့်လျက်ရှိနေ
မြန်မာပြည်မှာ ဒီလောက်တောင် များပြားလှတဲ့ ဖုန်းစနစ်တွေ အမျိုးအစားတွေနဲ့ သုံးစွဲသူတွေအတွက် ရွေးချယ်ရ ခက်ခဲလျက်ရှိ ပါတယ်။ နှစ်ကာလ ကြာရှည်စွာ တယ်လီဖုန်းဆိုတာ ပိုင်ဆိုင်မှု တခု၊ ရောင်းချလို့ရတဲ့ အရာတခု၊ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရထံမှ ၀ယ်ယူခွင့်ရရင် အခွင့်အရေး တရပ်အဖြစ်နဲ့ စွဲမြဲမှတ်ယူလာခဲ့ကြပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၀စုနစ် တခုလုံးလည်း မိုဘိုင်းဖုန်း တလုံးကို သုံးစွဲနိုင်ဖို့ ၀ယ်ခွင့်ရသူကို သိန်းဆယ်ဂဏန်းနဲ့ ချီပြီး အကျိုးအမြတ်တွေ ပေးခဲ့ရပါတယ်။ ယခုတလောမှာ မြို့နယ်တခုတွင်း ပြောဆိုသုံးစွဲနိုင်တဲ့ ၈၀၀ စီဒီအမ်အေ ဖုန်းတွေကို ကျပ်၅သိန်းနဲ့ ရောင်းပေးမယ် ဆိုတာကြောင့် ဒါဟာ အခွင့်အလမ်းတရပ်လားလို့ ထင်မြင်သူက ထင်မြင်နေကြပါသေးတယ်။
သို့ပေမယ်လို့ ဖုန်းအတွက် ကားအတွက် မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေ ရင်းနှီးပေးဆပ်ရတဲ့ ငွေပမာဏများပြားလွန်းလှပြီး နောက်ထပ် ၀ယ်အား မရှိ်ကြတော့ပါဘူး။ ဒိထက်ထပ်ကျ နိုင်သေးတယ်လို့လည်း ယူဆလာကြပါပြီ။ နကိုက ၁၇သိန်း၊ သိန်း ၂၀တန် တပြည်လုံးသုံး နိုင်တဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်း ဈေးလည်း ပြုတ်ကျလာပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ဆင်းကဒ် တကဒ်ကို ၂၅ ဘတ် (၇၅၀ ကျပ်)သာပေးရပြီး တမိနစ် ပြောဆိုခဟာလည်း တဘတ်(ကျပ် ၃၀သာသာ) ပဲရှိတာမို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ အနိမ့်ဆုံး ကျပ်ငါးသိန်း ရှိပါသေးတယ်။ အဆ ၇၀၀ နီးနီး ကွာခြားနေပါသေးတယ်။ ဖုန်းပြောခမှာလည်း မြန်မာနိုင်ငံက ထိုင်းနိုင်ငံထက် မြင့်နေပါတယ်။ အဲဒီအချက်တွေဟာ ဘယ်အချက်မှာ အခြေခံလည်းဆိုရင် လွတ်လပ်စွာ ပြိုင်ဆိုင်လုပ်ကိုင်ခွင့် မရှိတဲ့ အချက်မှာပါ။
မိုဘိုင်း ဆက်သွယ်ရေးကို နအဖ အစိုးရက နီးစပ်ရာ ကုမ္ပဏီကြီး တခုနှစ်ခုကိုပဲ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးပြီး သုံးစွဲသူအများဆီက အကျိုးအမြတ်များ ညှစ်ယူနေတဲ့ သဘောထား ကြောင့်လည်းသုံးစွဲသူတွေမှာ ရွေးစရာ လမ်းမရှိဖြစ်နေတဲ့ သဘောပဲ ဖြစ်ပါတယ်။